Nin Somali Ah Oo Galmo Ku Dilay Gabar U Dhalatay Finland Oo La Xiray - Hablaha Media Network
Nin Somali Ah Oo Galmo Ku Dilay Gabar U Dhalatay Finland Oo La Xiray
HMN:- Joel Morro oo kasoo Jeeda Senegal ayaa la xiray kadib markii uu 48 saacadood dul saarnaa gabar 20 jir ah oo u dhalatay Finland.
Booliska gobalka Uusimaa ee wadanka Finland ayaa sheegay iney xireen nin madoow ah oo galmo ku dilay gabar dhalad ah oo ay saaxib ahaayeen.
Ninkaan 34 jir ah ayaa la sheegay inuu ka baxsaday guriga markii uu ogaaday iney dhimatay saxibtiis, gabadhaan oo magaceeda lagu sheegay Anni waxaa ay la seexatay ninkaan markii uu ugu horeysay inkasto ay mudo lix bilood ah saaxib ahaayeen sida ay boolisku xogta ku heleen.
Afayeen u hadlay booliska waxaa uu sheegay in dhaqaartiirta Uusimaa Hospital iney sheegeen in gabnadhan ay sixun uga dhawacantay gudaha uuna naqsku ku xirmay sidaasna ay u dhimatay.
Dad daganaa qeybta sadexasad ee guriga uu shilkaan ka dhacay waxaa ay sheegeen in labo habeen oo xiriir ah ay maqalayeen qeylo badan oo ah qof dumar ah.
Joel Morro ayaa loo ogolaan doonaa inuu qabsado qareen difaaca madaama uusan gabadha xoogin oo ay saaxiib ahaayen.